Zanzibar Ichaita Musangano Wakakosha WePan African Women Empowerment Summit |
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Tanzania » Zanzibar ichaita Musangano wakakosha wePan African Women Empowerment Summit
Zanzibar ichaita Musangano wakakosha wePan African Women Empowerment Summit
Mufananidzo nerubatsiro rweaga2rk kubva kuPixabay
Zanzibar iri kutarisirwa kuita musangano wePan African Women Empowerment Summit (PAWES) kutanga kwaKurume, wakanangana nekukwezva madzimai akawanda emuAfrica kuti vatore chikamu mubhizinesi, zvemari, pamwe nehunyanzvi hwekusimudzira muAfrica.
Mishumo kubva kuvarongi vePAWES muZanzibar yakati chiitiko chekuungana kweSummit chichaisa simba rekutora matanho nekudyara kusimudzira hupfumi hwevakadzi uye kubatanidzwa mune zvemari muAfrica.
Mucherechedzo wechiitiko ichi ndewe “Africa for Africa Women’s Vision: United Women of Africa to sustainable economic sununguko.
PAWES yakarongerwa kuburitsa masangano ese aripo pamwe nemasangano everuzhinji neakazvimirira aripo nechinangwa chekupa rutsigiro, zviwanikwa, mari, uye dzidziso kuvakadzi nevechidiki mukondinendi yese yeAfrica.
Ichagadzirawo hukama pakati pematunhu nenyika dzine masangano aripo aya uye kuona kuti vamiriri vevakadzi vakawanda vagadzirwa, zvichiita kuti varongi nevane chekuita navo vagadzire mitemo uye nekukurudzira kugovewa kwezvekushandisa.
Musangano uyu uchakwezvawo kuvandudzwa kwechirongwa chekudzidzisa chinobatanidza vakadzi vakasimukira mubhizinesi vakawana budiriro uye vakaunganidza ruzivo rwekugovana nevakadzi vari kusimukira vemabhizinesi.
Chimwe chakanyanya kutariswa kushandiswa kwemisika yedhijitari iripo muAfrica kuratidza zvigadzirwa nemasevhisi, uku tichigadzira madzimai emuAfrica akawanda ane uye anomhanyisa mapuratifomu anobatanidza vatengesi nevatengi mukondinendi zvakanyanya uyezve kumusika wepasi rose.
Musangano uyu uchakurudzirawo kushandiswa kweInformation and Communication Technology (ICT) sematurusi akakosha ekutaurirana nekupanana ruzivo pamwe nekubatanidza vane chekuita nekuita basa mukuparura Indaneti inokwanisika uye nekuongorora mashandisirwo esimba rinowanikwa patsva. chengetedza kutaurirana uku.
PAWES 2022 ichatarisawo nezvezviratidziro, kutengeserana uye kukwidziridzwa kwekudyara, uye makirasi ekusimudzira hupfumi hwevakadzi uye kubatanidzwa kwemari, varongi vakadaro.
Musangano wemazuva matatu uyu uchaitirwa paGolden Tulip Zanzibar Airport pachitsuwa ichi uchitarisisa kusimudzira hutungamiriri, kudzidzisa nekupa mazano, uye shanduko yehupfumi nevakadzi vari kuita basa guru.
The African Tourism Bhodhi (ATB) iri pakati pevarongi nevatsigiri vePAWES iyo yakakwezva vatori vechikamu kubva kunyika dzinopfuura 21 muAfrica uye kunze kwekondinendi kusanganisira United States of America.
Kubhengi pachinzvimbo chayo muIndian Ocean, Zanzibar yave kuzvimiririra kukwikwidza nedzimwe nyika dzezvitsuwa mukushanya uye zvimwe zviwanikwa zvezviwanikwa zvemugungwa. Zanzibar yakamira zvine hungwaru pamhenderekedzo yekumabvazuva kweAfrica ine tsika dzakapfuma uye nhoroondo, mahombekombe anodziya eIndia Ocean, uye mamiriro ekunze anodziya.
Chitsuwa ichi chakaona kukura kunoshamisa kwekushanya, netarisiro yekukwezva vaenzi vakawanda vezororo. Zanzibar ine mukurumbira nemahombekombe ayo, kuredza kwakadzika kwegungwa, scuba diving, uye kuona ma dolphin.
Dzimwe nhau dzeZanzibar
Africa nhandare yendege ruzivo Internet Technology ushanyi nyika dzakabatana Zanzibar
Kenya Annual Tourism Report inoratidza Tariro Itsva
Kuvakazve Kufamba: World Tourism Network inoona nguva yave ikozvino
Hanse Mondial mugadziri mutsva we IMEX mu...
Unoda kudzidza kunze kwenyika? Nyika gumi dzepamusoro dzedzidzo...
Mitsva Yekuedza Mibairo yeGene Therapy yeSevere...
Cannabis Equipment Financing anoti:
Ndira 24, 2022 pa04: 51
Ini ndinoyemurwa neImpactful marongero anogonesa vechidiki kune zvakaringana uye zvakagadzikana. Ini ndinotsaurira iyi thesis kumhuri yangu nerutsigiro rwavo rwese dzidzo yangu.